एमसीसी खारेजीको माग गर्दै अनेरास्ववियूद्धारा विराटनगरमा प्रर्दशन – Pradesh Network
विराटनगर, १० असार । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) खारेजीको माग गर्दै विराटनगरमा प्रर्दशन भएको छ ।
अनेरास्ववियू निकट विद्यार्थीहरुले एमसीसीमा उल्लेख भएका वुँदा विवादास्पद भएकाले यसलाई सच्याउनु पर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।
उनिहरुले सदन राष्ट्रघात निर्णय गर्ने ठाउँ होइन, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद, सरकार भिख मागेर समृद्धि आउँछ ? के ५५ अर्व नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानको मुल्य हो ? लगायत लेखिएका प्ले कार्ड सहित प्रर्दशन गरेका थिए ।
उनिहरुले निरन्तर खबरदारी गर्ने बताएका छन् ।
विराटनगर, ३० वैशाख । प्रदेश १ मा कोरोना भाईरसको केन्द्रविन्दु मानिएको उदयपुरको भुल्केका १ हजार ४ सय व्यक्तिका लागि आज होमीयोपेथिक औषधि हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका डा. सरोजप्रसाद विशाल र नेपाल होमियोप्याथिक एशोसियनका अध्यक्ष डा. घनश्याम सुवेदीले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख वलदेव चौधरीलाई सो […]
बिराटनगर १६चैत । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवज्ञा गर्दै सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा हाटबजार सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।सर्वसाधारणलाई फलफूल तथा तरकारी किन्न अफ्टेरो परेको भन्दै नगरपालिकाले राज रङ्गशालामा हाटबजार सञ्चालनमा ल्याएको छ । रङ्गशालामा आजदेखि दैनिक बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्मका लागि तीन घण्टा हाटबजार लाग्ने बताईएको छ ।बजार पूर्ण रुपमा ठप्प रहेकोले सर्वसाधारणलाई किनमेल गर्न […]